Maamulka Baarlamaanka Federaalka oo shaaciyay xilliga la dhaarinayo Xildhibaanada cusub – Xeernews24
December 24 (XeerNews24)
Maamulka Baarlamaanka Feederaalka ee waqtigiisu dhamaaday ayaa caawa shaaca ka qaaday xilliga rasmiga ah ee ay dhaceyso munaasabada furitaanka Kalfadhiga 1aad ee Baarlamaanka 10aad iyo dhaarinta Xildhibaanada cusub ee Labada Aqal.
Xoghayaha Guud ee Maamulka Baarlamaanka Feederaalka C/kariin Xaaji Cabdi (Buux) ayaa caawa sheegay in maalinta talaadada ee taariikhdu tahay 27-ka December ay dhaceyso munaasabada furitaanka kalfadhiga 1aad iyo dhaarinta Xildhibaanada.
Xildhibaannada ku guulaystay xubinnimada labada aqal ee Baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya waxaan ku wargelinaynaa Xildhibaannada Baarlamaanka in munaasabadda dhaarinta lagu qaban doono xarunta Akadeemiyada General Kaahiye ee Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed” ayuu yidhi Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka.
Hase ahaatee waxaa jirta shaki laga qabo in mudada cusub ee uu shaaciyay Maamulka Baarlamaanka Feederaalka waqtigiisa dhamaaday inay ku qabsoomi weyso munaasabada dhaarinta Xildhibaanada cusub ee labada Aqal, waxaa wali taagan qodobo aan xal laga gaarin oo sabab u ahaa dib u dhacyada ku yimid doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha.
Madasha Wada-tashiga Qaran ayaa wali isku afgaran qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay arrinta Aqalka Sare ee gobolada Waqooyi, waxaana shirka Madasha oo maalmahan hakad ku jiray lagu wadaa in maalinta berri dib loo ambaqaado.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/kalfadhiga.jpg 365 648 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-25 00:30:532016-12-25 00:30:53Maamulka Baarlamaanka Federaalka oo shaaciyay xilliga la dhaarinayo Xildhibaanada cusub
Muran iyo jaha wareer ka taagan Xubnaha Aqalka sare ee reer Waqooyi Akhirso: War murtiyeed ka soo baxay shirkii Madasha iyo 18 xubnood oo lagu kordhiyay...